Semalt Expert: Ahoana ny fiverenan'ny lahatsoratry ny SEO?
Ao amin'ny orinasan-tserasera rehetra, ny fanatsarana ny môtô dia tena ilaina amin'ny fisehoana amin'ny aterinetoary koa ny fitomboan'ny fahamendrehana sy ny fiovam-po. Ho an'ireto sy antony maro hafa, ny laharana dia tsy maintsy manana endrika ho an'ny mpividy nomerikate-hijery ny SEO. Araka ny fijerin'ny Google Ranking fanao isan-taona avoakan'ny Searchmetrics, ireo antony ampiasain'ny algorithm GoogleNy tranonkala dia ahitana ny lanjan'ny votoatiny sy ny fahefana, ireo teknisiana teknika sy tranonkala ao amin'ny tranokalanao, ireo famantarana avy amin'ny votoaty Google
Na izany aza, ny fanadihadiana akaiky momba ny sasantsasany amin'ireo tranonkala mihazakazaka amin'izao fotoana izao dia mety hahitana tanterakafikarohana samihafa. Ohatra, amin'ny fehezan-teny manokana iray, ny kalitao sy ny habetsaky ny rohy dia mety tsy midika hoe ny toerana Googlemandrindra anao. Ohatra, ireo tranonkala misy rohy mahantra dia mety hihoatra lavitra noho ireo manana adiresy matanjaka kokoa.
Nitatitra ny Searchmetrics fa nandritra ny fotoana, dia nivadika ho ny laharana ny backlinksNy algorithm Google dia manandrana kokoa ireo antony hafa - free name for business. Izany fiovana izany dia vokatry ny fiposahan'ny haino aman-jery sosialy. Maro ny media sosialyMizara rohy izay mety hanehoana tsara ny fifamoivoizana. Noho izany, ny backlinks dia tsy ny tena zava-dehibe toy ny talohateo aloha. Izy ireo dia antony iray handravana ny fifindrana raha toa ka misy toerana misy azy ireo.
Jack Miller, lehiben'ny Senior Customer Succcess Mpitantana Semalt ,dia manadihady ny maha-zava-dehibe ny famerenana ny famerenana ho an'ny SEO iray manokana.
Ny votoatiny sy ny mpampiasa
Google dia milaza fa ny iray amin'ireo zavatra manan-danja indrindra hodinihina amin'ny fanaovana SEO diarelevant content. Ity tranga ity dia ny fahafaha-mamorona ny votoaty napetrakao amin'ny tranonkala ho an'ny mpampiasa fa tsy fananganana tonta fifamoivoizana ihany. TheNy maha-zava-dehibe ny votoaty dia miankina amin'ny fikarohana amin'ny teny keywords. Ny Google bots ihany koa dia afaka mamantatra ny fahazoan'ny olona manararaotra izany toe-javatra izany. BlackNy SEO tricks tahaka ny teny fototra izay tsy miasa intsony ary ny Google dia mamolavola tranonkala toy izany mandritra ny andro maromaro.
Ny tanjon'ny mpampiasa dia miankina amin'ny fomba ifandraisan'ilay mpampiasa amin'ny votoatiny manan-danja ao amin'nyvalin'ny fikarohana. Ny paikady mahaleo-pahefana ho an'ny fahazoana fifamoivoizana be dia be ankehitriny dia efa voasambotra hampiasa tsara ny algorithm Google,manao ny dingana manontolo izao miorina amin'ny fototra. Manoro hevitra ny mpandraharaha amin'ny aterineto i Google mba hitazona fifandanjana eo amin'ny maha-manan-danja sy ny mpampiasaFanomezana fahafaham-po, fa tsy teny fanalahidy fotsiny ihany.
Tsy tokony hanana hadisoana sy bibikely ny tranokala fiarovanao. Ny tranonkala dia tokonyhaingana dia haingana ary handray andraikitra amin'ny asa amin'ny fitaovana samihafa, rafitra rafitra ao anaty navigateur samihafa. Ny algorithm Google dia manome valisoa amin'ny tranonkalafanatsarana ny fifandraisana mora azo amin'ny alalan'ny laharana. Fomba teknika hafa toy ny tranonkala haingana, ny habe, ny rohy anatiny, ary ny HTTPSNy fampiantranoana dia manomboka rehefa mampifandray ny teknolojia amin'ny SEO sy ny fifandraisana.
Amin'ny fampiroboroboana dizitaly, ny fahombiazan'ny SEO dia manamboatra ny fihenan'ny aterineto sy nymarika nomerika. Ny fiverenana an-tserasera dia iray amin'ireo tetik'ady SEO izay nanao asam-pamoretana rehefa tranokalan'ny fanamarihana. Na izany aza, miaraka amin'ny vao hainganafanovana eo amin'ny fomba algorithm Google, sehatra hafa toy ny fepetra HTTPS, fandraisana an-tsokosoko Mobile, ny lanjan'ny votoaty sy ny sosialyny fampiroboroboana ny media dia miditra an-tsehatra Ny sidina avo, ny teny fanalahidy, ary ny teknika toy ny bait-and-switch dia tsy miasa intsony ary metyniteraka ny sazy SEO. Noho izany, ny làlan-dàlana dia tsy lanjany koa raha hampiakatra be ny lanjany raha te hanao fampielezan-kevitra SEO ianao.